mof – Puntaland Ministry of Finance
QARDHO – Wasiirka Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa magaalada Qardho ka xarig-jaray xarunta Wasaaradda Maaliyadda, taasoo lagu sameeyay dayactir ballaaran. Munaasabadda xarig-jarka ayaa waxaa kasoo qayb galay Guddoomiyaha gobolka Karkaar, Duqa degmada Qardho, Xisaabiyaha Wasaaradda Maaliyada gobolka Karkaar, Ganacsato iyo mas’uuliyiin kale. Wasiirka ayaa kula dardaarmay mas’uuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda in ay ka […]
October 9, 2021 / mof / 0 Comments
BOOSAASO – Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa Xafiiskiisa kulan kula qaatay qaar kamid ah Ganacsatada gobolka Bari. Kulanka ayaa waxaa goob joog ka ahaa Maamulaha Furdada Boosaaso Maxamud Yuusuf iyo Taliyaha Saldhiga Dekada G/sare Maxamed Cali Xaashi. Wasiirka ayaa Ganacsatada ku ammaanay sida ay ula sheeqeeyaan Wasaaradda Maaliyadda, waxaana uu […]
October 7, 2021 / mof / 0 Comments
BOOSAASO – Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi oo hawlo shaqo u jooga magaalada Boosaaso ayaa kormeer shaqo ku tagay Bangiga Dowladda Puntland laanta Xisaabaadka Wasaaradda Maaliyadda gobolka Bari. Guddoomiyaha Guud ee Bangiga Dowladda Cabdirisaaq Warsame Seeraar ayaa wasiirka halkaasi ku soo dhaweeyey, waxana uu booqaday Xafiisyada Maamulaha Bangiga, Xisaabiyaha Wasaaradda Maaliyadda […]
GAROOWE – Wasiir kuxigeenka Wasaradda Maaliyadda Puntland Mudane Cumar Xasan Fiqi ayaa manta magaalada Garoowe tababar ugu soo xiray mas’uuliyiinta ka socday Hanti-dhawrka gudaha ( Internal Audit) ee Wasaaradaha Maaliyadda ee Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Ujeedka tababarka ayaa ah in ay bartaan sidii ay baaris ugu samayn lahaayeen dhammaan howlaha Wasaaradu […]
Wasiirka Maaliyadda Puntland oo kormeer shaqo ku tagey Kastamka Airpor-ka iyo Xarunta Cashuuraha Berriga Boosaaso(Sawirro+Video)
BOOSAASO – Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi aya kormeer shaqo ku tagay Kastamka Garoonka diyaaradaha iyo xarunta Cashuuraha Berriga ee gobolka Bari. Kormeerka Wasiirka waxaa ku weheliyey Agaasimaha Kastamada Puntland Mahdi Cabdiqaadir Faarax (Qambi) iyo mas’uuliyiinta kale oo ka tirsan Wasaaradda. Wasiirku kormeer kan uu ku sameeyay goobaha dakhliga Boosaaso ee […]
October 6, 2021 / mof / 0 Comments
Dib u habeynta Darajada Shaqaalaha (Pay & Grading reform)
GAROWE-Wasiir Dowlaha Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Puntland Marwo Fardowsa Cismaan Cigaal ayaa Shir gudoomisay Gunaanadka Barnaamijka dib u eegida Mushaharaadka iyo darajooyinka Shaqaalaha Dowladda Puntland. Shirkan ayaa waxaa qayb ka ahaa Gudida dib u eegida Mushaharaadka iyo Darajooyinka Shaqaalaha Rayidka, Shirkan oo lagu casumay Agaasimayaasha guud ee Wasaaraddaha, Hayadaha dowladda iyo Madaxtooyada […]
BOOSAASO – Kastamka Furdada Dekadda Boosaaso waxaa kormeer shaqo ku tagey Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi. Maamulaha Furdada Boosaaso Maxamed Yuusuf ayaa Wasiirka ku soo dhoweeyay Kastamka Dekeda, waxana uu booqaday goobaha shaqadu ka socoto, isla markaana kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee Dekadda. Wasiirka ayaa kulan gaara la qaatay […]
October 5, 2021 / mof / 0 Comments
GALDOGOB – Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Cabdi Ibraahim Warsame” Qawdhan” iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa safar Shaqo ku tagey degmooyinka Galdogob, Buursalax, Xarfo iyo deegaamo kale. Wasiir Kuxigeenka ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiinta degmooyinkaas, amniga iyo Saraakisha goobaha Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland. Mudane Cabdi Ibraahim Warsame” Qawdhan” Waxa kormeerkiisa shaqo […]
GAROOWE – Mas’uuliyiin ka socda Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa tabarbar uga furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Dowladda Puntland. Madaxda Wasaaradaha Maaliyadda qaybta Hanti-dhowrka gudaha ee kala ah Puntland, Galmudug, Jubaland, Koonfur-galbeed iyo Hirshabeelle ayaa loo qabaty Tabarbarkan. Wasiir kuxigeenka Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Cumar Xasan Fiqi ayaa daah-furay tababarka, waxana ka […]
October 4, 2021 / mof / 0 Comments
GAALKACYO – Wasiirka kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Cabdi Ibraahim Warsame (Qowdhan) ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiinta Wasaraadda Maaliyadda gobolka Mudug, Kulanka ayaa ahaa mid lagu dar-dargelinayo shaqada. Mas’uuliyiinta kulanka ka qayb galay waxa ka mid ahaa Xisaabiyaha Wasaarada Maaliyadda gobolka Mudug, Kuxigeenka Agaasimaha Canshuuraha Berriga, Maamulayaasha Cashuuraha Berriga Iyo Kastamka, Madaxa Faracyada goobaha […]
October 2, 2021 / mof / 0 Comments